Kuthiwani eziqoshwe? – 2fish
Home / Church / Saints / Kuthiwani eziqoshwe?
Ukubona amaKatolika ukuguqa ngomthandazo ngaphambi nezithombe zikaJesu kanye Saints ebangela abanye ukuba babe novalo lokuthi amaKatolika zenza ukukhonza izithombe, kodwa lokho kwesaba Kusekelwe incazelo ongafanele wokuba Eksodusi 20:4.
Eksodusi 20:4 awukuvimbeli ukwenza izithombe, umlenze, kodwa ukukhulekela izithombe abe ngonkulunkulu (bheka Eksodusi 20:5).
Cabanga ukuthi uNkulunkulu qobo lwaKhe ngaphambilini ngama-Israyeli ukwenza eziqoshiwe amakherubi ngokuba Umphongolo Wesivumelwano futhi inyoka yethusi igibele abasebenzi (bheka Eksodusi 25:18-20, the Encwadi KaNumeri 21:8-9, noma Okokuqala Encwadi Kings 6:23 & 7:25).
Ngesikhathi ama-Israyeli ohlonishwayo letintfo, abazange nikhuleke kubo ngoba wakugwema imihlatshelo. (I ithole elibunjiweyo ka Eksodusi 32:5-7, Nokho, ukuze okwakubekelwa wanikela umhlatshelo kungenye into!)
Umehluko oyisisekelo phakathi isithombe Devotional futhi isithombe ukuthi wangaphambili ubhekwa isithombe uNkulunkulu noma umuntu abangcwele bebe mithandazo empeleni kucatshangwa ukuthi (bakhuleka njengoba) unkulunkulu. Ayikho amaKatolika kwesokudla nomqondo ukholelwa tithico nome Umfanekiso noma umdwebo noma i-jpeg unguNkulunkulu.
izithombe zenkolo yamaKatolika nje izikhumbuzo zikaNkulunkulu futhi Saints, okuyinto ziwusizo umthandazo nokudumisa. Ngakho, ukuphinda, kungekho LamaKatolika ekhulekela izithombe zangempela noma statues Nkulunkulu, kodwa senza babone ubuhle ukuthi abaculi, abelokhu esiphefumulelwe uNkulunkulu, ngikudalile kithi–eziningi umusa la makhasi.